Aripiprazole နှင့်ဆက်စပ်ဖွယ်ရှိသည့် Hypersexuality အဖြစ်အပျက်နှစ်ခု (2013) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
သေချာသလောက်ကတော့ Aripiprazole (2013) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ Hypersexuality နှစျယောကျမှုများ
စိတ်ရောဂါကုသမှု - ၂၀၁၃ (အတွဲ ၁၀၊ စာစောင် ၂၊ စာမျက်နှာ ၂၀၀-၂)
EunJin Cheon1; ဘွန်-Hoon Koo1; Soo Seo Sang2; နှင့်ဇွန်လ-Yeob Lee က3; 1; စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, ဆေးပညာ Yeungnam တက္ကသိုလ်ကောလိပ်, Yeungnam တက္ကသိုလ် Medical Center မှာ, Daegu,
2; စိတ်ရောဂါကုသမှု, ဆေးပညာကျောင်းရဲ့ဦးစီးဌာန, Kyungpook အမျိုးသားတက္ကသိုလ်, Daegu,
3; စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, Cha Gumi Medical Center မှာ Cha တက္ကသိုလ်, Gumi, ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု antipsychotics နဲ့ကုသတဲ့လူနာတွေမှာဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများတွင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ Aripiprazole နှင့်ကုသမှုခံယူရသော schizophrenia ရောဂါရှိသည့်အမျိုးသမီးလူနာနှစ် ဦး တွင် hypersexuality လက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည်။ aripiprazole သောက်ပြီးနောက်လူနာများသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပိုမိုမကြာခဏကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအာရုံကြော - ဓာတုပစ္စည်းယန္တရားများကိုဆွေးနွေးပြီး aripiprazole ၏ထူးခြားသောဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာပရိုဖိုင်း၊ dopamine D2-receptor တွင်မြင့်မားသောသက်ဆိုင်မှုနှင့်အတူပြင်းထန်သောနာကျင်မှု၊ ဤရောဂါလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုငြင်းခုန်ခဲ့သည်။
Key ကိုစကား Aripiprazole; Hypersexuality; Dopamine; တစိတ်တပိုင်း agonist ။
စာပေးစာယူ: ဘွန်-Hoon Koo, MD, Ph.D, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, ဆေးပညာ Yeungnam တက္ကသိုလ်ကောလိပ်, 317-1 Daemyeong 5-dong, နမ်-Gu, Daegu, 705-703, ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ
Tel: + 82-53-622-3343, ဖက်စ်: + 82-53-629-0256, E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မကြာမီက Meta-analysis သည်1 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု antipsychotics နဲ့ကုသသောလူနာတစ်ဦးဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင်းပြသပေမယ့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများကိုဖြတ်ပြီးတည်ရှိ။ olanzapine, risperidone နှင့် clozapine ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသော်လည်း Aripiprazole, အတော်လေးနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားတိုးမြှင့်သွေးရည်ကြည် prolactin အာရုံစူးစိုက်မှု၏သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ် dopamine ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းမှတိုက်ရိုက် antipsychotic ဆေးဝါးရလဒ်များကိုနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။2,3,4 ㅔသို့သော်သုတေသီများ hypersexuality quetiapine ယူပြီးလူနာအတွက် antipsychotic ဆေးဝါးစားသုံးမှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ5 သို့မဟုတ် aripiprazole ။6 Aripiprazole ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ dopamine D2 receptors မှာယင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonistic လှုပ်ရှားမှု၏အခြားလက်ရှိအတည်ပြု antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေကွဲပြားနေသည်။ ဒါဟာ aripiprazole မှ switching သို့မဟုတ်အခြား antipsychotic စစ်အစိုးရမှ aripiprazole ၏ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်လျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသိရသည်။7 ㅔဤတွင်ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်း schizophrenia နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအမျိုးသမီးလူနာ aripiprazole ကုသမှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ် hypersexuality သတင်းပို့ပါ။
ㅔမစ္စတစ်ဦးက schizophrenia, အကြောက်လွန်ရောဂါအမျိုးအစားနှင့်အတူတစ်ဦး 37 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးလူနာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်မှုများထပ်တလဲလဲဝင်ခွင့်များလိုအပ်ဆင်းရဲသားကိုလိုက်နာမှုနှင့်အတူမျိုးစုံ relapses တစ်သမိုင်းရှိပါတယ်။ သူမသည်ရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၏ဘေးဥပဒ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ဆေးရုံနှင့် risperidone5မီလီဂရမ် / နေ့သူမ၏မှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ပြီးနောက်သူမက galactorrhea နှင့် amenorrhea ခံစားခဲ့ရသညျ။ နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ဆေးထို့နောက် 10 မီလီဂရမ် / နေ့ဖို့, aripiprazole ၏ 20 မီလီဂရမ် / နေ့သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူမရဲ့အပြုသဘောရောဂါလက္ခဏာတွေကဒီသောက်သုံးသောတိုးပြီးနောက်လျော့နည်းသွားပေမယ့်သူမရဲ့လိင်စိတ်ဒီသောက်သုံးသောတိုးပြီးနောက်တစ်လအတွင်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ hypersexuality နေ့စဉ်လိင်ဆက်ဆံများအတွက်) ဝယ်လိုအား, 1) အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကို2အားဖြင့်ပြသခဲ့ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေကိုကြိုတင်သူမ၏ aripiprazole ကုထုံးမှပြသခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်ကန့်သတ်အတွင်းအားလုံးရှိကြ၏။ ကျနော်တို့ aripiprazole ကုထုံးနှင့်သတ်မှတ်ထားသော risperidone 0.5 မီလီဂရမ် / နေ့ရပ်စဲပေမယ့်လူနာအကြာတွင်မစ္စတစ်ဦးကဖောက်ပြန်၏မောဟနဲ့ psychotic ဇာတ်လမ်းတွဲများအတွက်ဆေးရုံတင်ခဲ့သည်လအတွင်း-up.5 အတိုင်းလိုက်နာမှပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည် quetiapine 800 မီလီဂရမ် / နေ့နဲ့ကုသခဲ့ပါတယ်။ နှစ်လပြီးနောက်သူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံကနေဆင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သူမ၏စိတျအပိုငျးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတစ်ခုတိုးလာဝယ်လိုအားမရှိအစီရင်ခံစာရှိသည်, ဖောက်ပြန်၏သူမ၏မောဟလည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။
Ms B သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က schizophrenia ရောဂါခံစားခဲ့ရသည့် ၃၆ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးလူနာဖြစ်သည်။ သူမသည် obsessive-compulsive နှင့်ရှောင်ရှားခြင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာဘယ်တော့မှလိင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ရက်စက်စွာဆက်ဆံခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ မစ္စ B သည်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုလှည့်စားခြင်း၊ အာရုံအာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းများခံစားခဲ့ရသည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်လူနာဆေးခန်းတွင် haloperidol ဟုသတ်မှတ်ထားပြီးသူသည်တစ်နေ့လျှင် risperidone 36-10 mg နှင့်တစ်နေ့လျှင် 2-9 mg / fluoxetine ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်မားသောကြောင့်သူမ၏ဆေးကို aripiprazole 20 mg / day နှင့် fluoxetine 40 mg / day သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒီဆေးပြောင်းပြီးနောက်မှာတော့သူဟာလိင်စိတ်တွန်းအားနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူမသည်တစ်ခါတစ်ရံသူစိမ်းများအပေါ်အလိုအလျောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူမရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအသစ်တွေကသူမကိုအတော်လေးရှက်ရွံ့စေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အပြစ်ရှိလာခဲ့တယ်။ လူနာ၏အခိုင်အမာပြောကြားချက်အရသူမဆေးကိုတစ်နေ့လျှင် ၆ မီလီဂရမ် risperidone quicklet အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး fluoxetine7mg / day ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသည်။ aripiprazole ကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါသူမ၏မြင့်မားသော libido အဆင့်သည်သူမ၏အခြေခံအဆင့်သို့လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည်။
လိင်စိတ် antipsychotics အားဖြင့် dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နိုင်လျော့နည်းသွားသည်။3,4 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်ပြောင်းပြန်, စိတ်ကူးယဉ်, စိုက်ထူနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော L-dopa, စိတ်ကြွဆေးနှင့် pramipexole အဖြစ် dopamine agonists နဲ့ကုသယောက်ျားအစီရင်ခံခဲ့သည်။8 testosterone ဟော်မုန်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဓိကအာမခံထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမဲ့, ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (CNS) dopaminergic နှင့် serotoninergic လမ်းကြောင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပုံရသည်။ serotonin လိင်အပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း inhibitory သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်စဉ်အထူးသဖြင့်, ထို hypothalamus နှင့် limbic system ကိုလင့်ထားသော (incertohypothalamic နှင့် mesolimbic) ဦးနှောက် dopamine စနစ်များသည် excitatory စနစ်၏အဓိကဖွဲ့စည်းရန်ပေါ်လာပါသည်။9 ㅔAripiprazole အဆိုပါ dopamine D ကိုမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရောကျသောအသုံးချဖို့ပထမဦးဆုံးဆေးခန်းမရရှိနိုင် atypical antipsychotic မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါသည်2တစ်ဦး atypical antipsychotic ပရိုဖိုင်းကိုအောင်မြင်ရန် -receptor ။10 ကျနော်တို့ aripiprazole ရဲ့ dopaminergic agonistic သက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါယူဆ။ mesolimbic လမ်းကြောင်းကိုပိတ်မည့်အစားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonism သည်လမ်းကြောင်းကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏နေရာများတွင်တိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာပေးသည်။11 ကျနော်တို့ aripiprazole အထူးသဖြင့်နျူကလိယ accumbens မှာ mesolimbic dopaminergic ဆားကစ်မှာယခင်ကဖိနှိပ် dopaminergic လှုပ်ရှားမှု disinhibited ကြောင်းယူဆ။
ဂန္အဲဒီ receptor သီအိုရီအရ, receptors တွေရဲ့သိပ်သည်းဆကိုတိုက်ရိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists ၏အခ်ါလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုး။12 ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ကကြိုတင် neuroleptic ထိတွေ့မှုကတစ်ရှူးများ၏တုန့်ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီး aripiprazole ၏ agonist ပရိုဖိုင်းကိုမျက်နှာသာပေးလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။13 hypersensitive dopamine receptors ဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း D2 agonist ၏ထို့အပြင်အဆိုပါ mesolimbic ဆားကစ်မှာ enhan-ced dopaminergic drive ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ Aripiprazole လည်း 5-HT ရှိပါတယ်1A တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist နှင့် 5- HT2A ရန်ဂုဏ်သတ္တိများ။14 တချို့ကအထောက်အထား 5-HT ၏ activation အကြံပြု2 အဲဒီ receptor အဆိုပါ 5-HT ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဆွချို့ယွင်း1A အဲဒီ receptor လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။15 5-HT ရှိသည်သောမူးယစ်ဆေးဝါး1A agonist နှင့် 5- HT2A ရန်ဂုဏ်သတ္တိများဆိုလိုသည်မှာ nefazodone နှင့် mirtazapine, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်, အနည်းငယ်မျှသာ, ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။16 Cyproheptadine, တစ်ဦး 5HT2 ရန်လက္ခဏာသွေးဆောင် anorgasmia လျှော့ချအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။15 အခြားတစ်ဖက်တွင်, နှစ်ဆမျက်စိကန်းထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား aripiprazole prolactin မြင့်နဲ့ဆက်စပ်မရကြောင်းပြသသည်။17 အချုပ်အားဤအဲဒီ receptor profile များကိုနှင့် hyperprolactinemia ၏မရှိခြင်း hypersexuality ၏အသွင်အပြင်များအတွက်အလားအလာမျက်နှာသာလေထုများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်ထပ်သုတေသန aripiprazole လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်အရာကနေတဆင့်အတိအကျယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စများတွင် hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ indiscretions ၏သမိုင်းမပါဘဲလူတို့တွင်ပေါ်ထွက်။ အဆိုပါလူနာကပိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ aripiprazole ယူပြီးပြီးနောက် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်တွေ့ကြုံ။ ဒုတိယဖြစ်ရပ်မှာ hypersexuality လုံးဝ aripiprazole ပျစဲလူနာများ၏ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သို့သျောလညျးကိုပထမဦးဆုံးအမှု၌, ငါတို့ကြောင့်အ psychotic လက္ခဏာတွေနောက်ဆက်တွဲနှင့်ထပ်မဖြစ်အောင်၏ဆုံးရှုံးမှု, သူမ၏ hypersexuality လက္ခဏာတွေပြေလည်မှာအတိအကျကိုအချိန်အကြောင်းကိုသေချာမဖွစျနိုငျတယျ။ Hypersexuality ဖြစ်နိုင်သည်ဖောက်ပြန်၏မောဟ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း precipitate ပေလိမ့်မည်။ ကိုမလူနာ aripiprazole ယူခြားပြီးနောက်အလားတူ Hyper-လိင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု reoccurrence ခံစားခဲ့ရသညျ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် aripiprazole သည် schizophrenia ရှိလူနာများတွင်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်နျူကလိယ accumbens မှာ mesolimbic circuit ကိုမှာ aripiprazole ရဲ့ dopaminergic agonistic သက်ရောက်မှု hypersexuality ဖြစ်ရပ်ဆန်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့် hypersexuality ကို aripiprazole ၏ဖြစ်နိုင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကြံပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆရာ ၀ န်နှင့်လူနာ၏ဘေးထွက်များမှဤပြicationsနာများသည်နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်လူနာအတွက်ဝေဒနာခံစားရခြင်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Serretti တစ်ဦးက, Chiesa အေ antipsychotics ယူပြီးစိတ်ရောဂါလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Meta-analysis သည်။ int Clin Psychopharmacol 2011; 26: 130-140 ။
Cutler AJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် antipsychotic ကုသမှု။ Psychoneuroendocrinology 2003; 28 (ပျော့ပျောင်း 1): 69-82 ။
Haddad pm တွင်, Wieck အေ Antipsychotic-သွေးဆောင် hyperprolactinaemia: ယန္တရားများ, လက်တွေ့ features နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါး 2004; 64: 2291-2314 ။
Knegtering H ကို, ဗန် der Moolen AE, Castelein S က, Kluiter H ကို, ဗန်တွင်း Bosch ရဲ့ RJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့် endocrine လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ် antipsychotics ၏သက်ရောက်မှုကဘာတွေလဲ? Psychoneuroendocrinology 2003; 28 (ပျော့ပျောင်း 2): 109-123 ။
Menon တစ်ဦးက, Williams ဟာ RH အ, Watson ဟာအက်စ် quetiapine နှင့်ဆက်စပ်တိုးမြှင့်လိင်စိတ်။ J ကို Psychopharmacol 2006; 20: 125-127 ။
Schlachetzki JC, Langosch JM ။ Aripiprazole schizoaffective ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦး 24 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးလူနာအတွက် hypersexuality သွေးဆောင်? J ကို Clin Psychopharmacol 2008; 28: 567-568 ။
Kerwin R ကို, Millet B, Herman အီး, Banki CM, Lublin H ကို, အိုး M က, et al ။ (STAR) လေ့လာမှု: လူထုကုသ schizophrenic လူနာ Aripiprazole ၏ Schizophrenia စမ်းသပ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စောင့်ရှောက်မှု၏ aripiprazole နှင့်စံများအကြားတစ်ဦးက multicentre Random, Naturalist, Open-တံဆိပ်လေ့လာမှု။ EUR စိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 22: 433-443 ။
Sansone RA, Ferlan အမ် Pramipexole နှင့် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု (Edgmont) 2007; 4: 57-59 ။
Pfaus JG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏လမ်းကြောင်း။ J ကိုလိင် Med 2009; 6: 1506-1533 ။
Kessler RM ။ Aripiprazole: dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရောကျသော၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 164: 1310-1312 ။
Stahl သည် SM ။ Dopamine စနစ်တည်ငြိမ်မှု၊ aripiprazole နှင့်နောက်မျိုးဆက် antipsychotics အပိုင်း (၁)၊ “ Goldilocks” dopamine receptors တွင်လုပ်ဆောင်မှုများ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1; 2001: 62-841 ။
Hoyer: D, Boddeke HW ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists, အပြည့်အဝ agonists, ရန်: ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏ပြဿနာများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ 1993; 14: 270-275 ။
Koener B, Herman အီး, Maloteaux JM Jean-ဂျင်းတစ်ဦးက, စဉ်ဆက်မပြတ် EL ။ aripiprazole မှ atypical neuroleptics နေ switch ကိုအောက်ပါဝိရောဓိမော်တာ syndrome ရောဂါ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 164: 1437-1438 ။
Grunder, G, Kungel M က, Ebrecht M က, Gorocs T က, မော်ဒယ်အက်စ် Aripiprazole: schizophrenia များ၏ကုသမှုများအတွက် dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist ၏ pharmacodynamics ။ Pharmacopsychiatry 2006; 39 (ပျော့ပျောင်း 1): S21-S25 ။
Meston CM, Frohlich PF ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏ neurobiology ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 57: 1012-1030
Farah အေ mirtazapine ကုသမှုနှင့်အတူ SSRI-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကယ်ဆယ်ရေး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 60: 260-261 ။
Dossenbach M က, Hodge တစ်ဦးက, et al Anders M က, Molnar B, Peciukaitiene: D, Krupka-Matuszczyk ငါ။ schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနှင့်အထင်သေး။ int J ကို Neuropsychopharmacol 2005; 8: 195-201 ။